FAMETRAHANA FANDRIAM-PAHALEMANA MAHARITRA : Nifampidinika mivantana niaraka tamin’ny depiote ny Seg
Ho fanohizana ny fikatsahana fandriam-pahalemana any amin’ireo faritra mena manerana ny Nosy dia nikaon-doha niaraka tamin’ireo solombavambahoaka avy any Matsiatra Ambony sy Amoron’i Mania indray ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (seg), ny Jeneraly Ravalomanana Richard sy ireo mpiara-miasa aminy. 21 août 2019
Tsy nionona fotsiny tamin’ny antso avo nataon’ireto solombavambahoaka ireto teny amin’ny Antenimieram-pierenena mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao ny seg fa nampiantrano azy ireo mihitsy mba hahafahana mitady vahaolana maharitra. Ny fomba hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ireo faritra roa voalaza tetsy ambony no niompanan’ny resaka. Nangataka ny hidinan’ireo Minisitra miandraikitra ny fandriam-pahalemana any amin’ireto faritra mena ireto ireo solombavambahoaka nihaona tamin’ny Seg mba hijery ifotony ny zava-misy any an-toerana.
Nangatahin’izy ireo ihany koa ny hitohizan’ny fampiasana ireo angidimby amin’ny fanenjehana an’ireo dahalo mampikaikaika ny mponina any an-toerana satria ny fisian’iny no nampitony ny asan-dahalo teo aloha. Notsindrian’izy ireo manokana ihany koa ny lesoka amin’ny fanesorana ireo miaramila manao DAS amin’ireo faritra sasany, ka nampahazo vahana indray ny asan-dahalo any amin’iny faritra iny.
Nanambara avy hatrany ny seg fa hamafisina araka izay azo atao ny fandriam-pahalemana ary hovaliana avokoa ireo hetahetan’ireto solombavambahoaka ireto. Nambaran’ny Jeneraly Ravalomanana Richard fa efa misy ny paikady napetraka nandritray ny fivoriambe nataon’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimaria.
Hampiharina amin’ireo faritra rehetra manerana an’i Madagasikara io paikady io ary hojerena manokana mihitsy ireto faritra roa ireto. Araka izany, hisy ny fidinana ifotony hataon’ireo Minisitera misahana ny fandriampahalemana ato ho ato, hametrahana ireo rafitra sy paikady hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana isam-paritra indrindra ny fametrahana ireo USAD sy ny ZRPS ary ny CSAO any amin’ireo faritra ireo ankoatra ny fananganana Compagnie isaky ny distrika. Tsiahivina fa ankoatra ireto solombavambahoaka ireto dia efa noraisin’ny Seg ihany koa ny solombavambaoakan’i Taolagnaro.